Muslimiinta Sweden oo cambaareysey weerarkii Paris - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Digniin degaanada Ängra iyo Ljusdal Digniin Pålgård iyo Näset ee degaanka Ragunda
Sheekh Cabdirahmaan Sheekh Muxiyadiin Celi. Foto:privat
Muslimiinta Sweden oo cambaareysey weerarkii Paris
Sheekh Cabdirahmaan Celi: nama matalaan
La daabacay fredag 9 januari 2015 kl 14.26
Inta badan Muslimiinta caalamka ayaa canbaareeyey weerarkii dadka badan u ku dhinteen ee lagu qaadey arbacadii wargeyska shactiroolaha ah Charlie Hebdo, ee ka dhacay magaalada Paris dalka Fransiska.
Muslimiinta Sweden ee weerarkan canbaareyey waxaa ka mid ah Sheekh Cabdirahman Sheekh Muxiyadiin Celmi oo ah imam ku nool magaalada Göteborg, kuna xeel dheer culumta bulshada iyo diinta Islamka. Sheekha ayaa sheegay in weerarkan yahay dhacdo aad u xanuun badan:
- Waa dhacdo aad iyo aad runtii u xanuun badan. in naf la gooyo, qaabkaas loo gooyo waa wax aad iyo aad runtii u xanuun badan. Annigu ma aaminsani in xoog iyo dagaal yahiin xalka keliya.
Wargeyska la weerarey ee Charlie Hebdo ayaa wargeys shactiroole ah oo sawiro farshaxan ah ka sameeya cid kasto oo ay u arkaan in ay awood caalamka ku leedahay. Hadey ahaan laheyd madaxda caalamka, nibiyada, culimada diimaha. Sida ay sheegeen dad ka badbaadey weerarka todobaakan lagu qaadey wargeyskan ayaa sheegay in ragga weerarka geystey ay yiraahdeen in u aargudayaan nabi Moaxamed oo wargeyska sawiro shactiro ah ka sameeyey.
Sheekh Cabdirahmaan Muxiyadiin Celi ayaa sheegay in aysan meelna uga banaaneyn diinta islamka weeraka raggan ku baabi’iyeen shaqaalahi wargeyskan iyo labo boolis ah oo goobta ka ag dhawaa. Sheekha ayaa qaba in ay muhim tahay dhowrista xoriyadda hadalka balse ay sidoo kale muhim tahay in xoriyadda halka a xad yeelato oo aan lagu xad gudbin waxyaabah ay ummadaha noocay rabaan ha la haadeene ay weyneeyaan, inkastoo aan marna raali laga ahaan karin weerarka waxuushnimada ah ee arbacadii ka dhacay magaalada Paris:
- Waxaa markeeda hore qalad ah in ayadoo xoriyatu qowl la sheeganayo in lagu xadgudbo dadka kale sharaftooda, caqiidadooda iyo diintooda. Ama ha noqoto islamka ama diimaha kale. Qaladkaan hadda la sheegayo oo la leeyahay diinta ama diimahii ayaa lagu xad gudbay waxaa ka daran oo ka foolxun qofkan ama kooxdaan waxay sameysey. Aqoonta aan diinta islamka u leeyahey ma ogalaaneyso diinta islamaka falalkan dilalka iyo argagaxisada ah.
Islam naceyb sii kordha
Ka dib weerarkan argagaxisada ah maalintii arbacadaha dhacay ayaa waxaa soo badanaya weerarada loo geysanaya masjidyada ku yaala dalka Faransiiska. Falalkan lagu weerarayo masjida ayaa ah kuwo u dhigma weeraro horey loogu geystey xaruumaha cidbaadada ee muslimiinta. Sheekh Cabdirahman ayaa aaminsan in weerarkii arbaca ee loo geystay wargeyska Charlie Hebdo uu sii xoojin doono muslim naceyb ka taagan qaaradda Yurub. Ayna biyo uga buuxineyso baaquli qolyaha abaabulan ee islam diidka ah:
- Runtii arrintaan saameyn weyn iyo cawaaqiib aad iyo aad qatar u ah ayey keeni kartaa. Keeni kartaa keliye ma ahee waaba dareemeynaa hadda dabeysheeda. Waxaad arkeysaa in masaajidyo la gubayo, waxay siin doontaa waxa la yiraahdo islamafobi (naceybka islamaka) oo ah suurad xun oo laga baxinayo islamaka iyo muslimiinta ayey sii xoojin doontaa.
- Waxaan leeyahay muslim iyo gaal waxaas waxii sameeyey kow waan cabaareyneynaa, waxaana ka qaadaneynaa mowqif cad, waana iska fageyneynaa arrintaa haddaan muslimiinta nahay. Waxaana aad iyo aad uga welwelsannahay dadka maskiinta ah muslim iyo gaalba ee ay dhibaatada iyo saameynta u keeneyso, ayuu yeri Sheekh Cabdirahman Sheekh Muxiyadiin Celi.
Dhibaatooyinka taagan ee ay horumoodka ka yahiin xagjariinta dhinacyadooda kalo gedisan waa kuwo ay ujeedadooda tahay sidii ummadaha laysku diri lahaa oo dhibaato looga dhax abuuri lahaa, sidoo kalena waa dhibaato ku dhisan jahli iyo aragtiyo aan raad laheyn ayuu yeri Sheekh Cabdirahman Muxiyadiin Celi. Asaga oo ugu baaqay ummadaha in aysan ogalaanin in kooxahaan matalaan:
- Dhibaatadan taagan waa jahli, waa aqoon la'aan kuna dhisan aragtiyo aan raad la heyn, dadkana la siiyey jawaabo diyaarsan oo lagu yeri saan iyo saan dadka kale ula dhaqma. Waxaan dhahi lahaa aqoonta hala dhiirogeliyo, waxaan kaloo dhahi lahaa muslimiinta yeysan ogalaanin in ay matalaan kooxahan. Maxaa yeelay aadanaha waxay ku noolyahiin hal xidig oo aduunka ah, marka haddi qolawelba ay soo hormariso dadka xun marweliba aduunyada dagaal iyo dhibaato kama dhamaaneyso.